Australia နိုင်ငံ ကိုဗစ်ဖြေလျှော့မှု အစီအစဉ်ဆွဲထား
၂၇ စက်တင်ဘာ၊ ၂၀၂၁
ကိုဗစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဆေးထိုးပြီး ရာနှုန်းပေါ်မူတည်ဖြေလျော့ပေးသွားဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ New South Whales ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Gladys Berejiklian
Australia နိုင်ငံမှာ လူဦးရေအထူထပ်ဆုံး New South Wales ပြည်နယ်မှာ လူဦးရေ ၇၀% ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ဒုတိယအကြိမ် ထိုးပြီးသွားလောက်ချိန် အောက်တိုဘာလမှာ Lockdown လုပ်ထားတာ ဖြေလျော့ပေးမယ်လို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ပြော ကြားလိုက်ပါတယ်။ ပြည်နယ်ထဲမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ် ဆေးအပြည့် ထိုးမထိုးပေါ်မူတည်ပြီး ဖြေလျော့မှုတွေလုပ်သွားမယ့် အစီအစဉ်တွေကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Gladys Berejiklian ကဒီနေ့ တနင်္လာနေ့မှာ ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
New South Wales ပြည်နယ်ထဲမှာ လူဦးရေ ၈၀% ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၂ လုံးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင် ပြည်နယ်ထဲမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနိုင်မယ်ဆိုတာ အတည်ပြုပြောနိုင်ပါတယ်လို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် Berejiklian ကပြောကြားသွားတာပါ။ အောက်တိုဘာလ ဒုတိယပတ်လောက်မှာ လူဦးရေ ၇၀% လောက် ဆေး ၂ လုံးထိုးပြီးသွားလောက်ပြီလို့ ခန့်မှန်းထားပြီး အဲဒီအချိန်ကစလို့ ဖြေလျော့မှုတွေ စလုပ်နိုင်မယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
၈၀% လောက် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အပြည့်ထိုးပြီးချိန်ကျရင်တော့ လူအများပါဝင်တဲ့ အားကစားပွဲတွေ၊ ဒေသတွင်း ခရီးသွားလာမှုတွေအပါအဝင် ကန့်သတ်ချက်တော်တော်များများကို ဖြေလျော့ပေးနိုင်မယ်ဖို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးလုံးဝ မထိုးသူတွေအတွက် အသွားအလာ ကန့်သတ်ချက်တွေကိုတော့ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှာ ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ New South Wales ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က အစီအစဉ်တွေကို ကြေ ညာခဲ့ပါတယ်။ ပြည်နယ်ထဲမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးသင့်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားသူရဲ့ 85% လောက် ကာကွယ်ဆေး ၁ လုံးထိုးပြီးနေကြပါပြီ။
Australia နိုင်ငံမှာ မြို့တော် ပိုင်နက်ဧရိယာ ပြီးရင် New South Wales ပြည်နယ်က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးမှုလုပ်ငန်းတွေကို အမြန်ဆုံးလုပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကစပြီး ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်သားအင်အား အပြည့်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့သလို အမိုးအကာမပါတဲ့ ရေကူးကန်တွေကိုလည်း ပြန်ဖွင့်ခွင့် ပြုခဲ့ပါတယ်။ လူချင်း ခပ်ခွာခွာနေကြရမယ့် စည်းကမ်းတွေကိုတော့ ဆက်လက်သတ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ Australia နိုင်ငံမှာ ကူးစက်မြန် Delta ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်သူ June လမှာ စရှိခဲ့ပြီးနောက် ကိုဗစ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်စည်းကမ်းတွေကို ပြည်နယ်တွေအလိုက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတွင်း N.S. W ပြည်နယ်မှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၇၈၇ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁၂ ယောက်စံချိန်တင်များခဲ့တယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေ တနင်္လာနေ့က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Australia နိုငျငံ ကိုဗဈဖွလြှေော့မှု အစီအစဉျဆှဲထား
Australia နိုငျငံမှာ လူဦးရအေထူထပျဆုံး New South Wales ပွညျနယျမှာ လူဦးရေ ၇၀% ကိုဗဈကာကှယျဆေး ဒုတိယအကွိမျ ထိုးပွီးသှားလောကျခြိနျ အောကျတိုဘာလမှာ Lockdown လုပျထားတာ ဖွလြေော့ပေးမယျလို့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျက ပွော ကွားလိုကျပါတယျ။ ပွညျနယျထဲမှာ ကိုဗဈကာကှယျ ဆေးအပွညျ့ ထိုးမထိုးပျေါမူတညျပွီး ဖွလြေော့မှုတှလေုပျသှားမယျ့ အစီအစဉျတှကေို ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ Gladys Berejiklian ကဒီနေ့ တနင်ျလာနမှေ့ာ ကွညောခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
New South Wales ပွညျနယျထဲမှာ လူဦးရေ ၈၀% ကိုဗဈကာကှယျဆေး ၂ လုံးထိုးပွီးသှားပွီဆိုရငျ ပွညျနယျထဲမှာ လှတျလှတျလပျလပျ သှားလာနိုငျမယျဆိုတာ အတညျပွုပွောနိုငျပါတယျလို့ ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျ Berejiklian ကပွောကွားသှားတာပါ။ အောကျတိုဘာလ ဒုတိယပတျလောကျမှာ လူဦးရေ ၇၀% လောကျ ဆေး ၂ လုံးထိုးပွီးသှားလောကျပွီလို့ ခနျ့မှနျးထားပွီး အဲဒီအခြိနျကစလို့ ဖွလြေော့မှုတှေ စလုပျနိုငျမယျလို့ သူကပွောပါတယျ။
၈၀% လောကျ ကိုဗဈကာကှယျဆေး အပွညျ့ထိုးပွီးခြိနျကရြငျတော့ လူအမြားပါဝငျတဲ့ အားကစားပှဲတှေ၊ ဒသေတှငျး ခရီးသှားလာမှုတှအေပါအဝငျ ကနျ့သတျခကျြတျောတျောမြားမြားကို ဖွလြေော့ပေးနိုငျမယျဖို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ ကာကှယျဆေးလုံးဝ မထိုးသူတှအေတှကျ အသှားအလာ ကနျ့သတျခကျြတှကေိုတော့ဒီဇငျဘာ ၁ ရကျနမှေ့ာ ဖယျရှားနိုငျမှာဖွဈတယျလို့ New South Wales ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျက အစီအစဉျတှကေို ကွေ ညာခဲ့ပါတယျ။ ပွညျနယျထဲမှာ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးသငျ့တယျလို့ သတျမှတျထားသူရဲ့ 85% လောကျ ကာကှယျဆေး ၁ လုံးထိုးပွီးနကွေပါပွီ။
Australia နိုငျငံမှာ မွို့တျော ပိုငျနကျဧရိယာ ပွီးရငျ New South Wales ပွညျနယျက ကိုဗဈကာကှယျဆေး ထိုးမှုလုပျငနျးတှကေို အမွနျဆုံးလုပျနတေဲ့ ပွညျနယျဖွဈပါတယျ။ ဒီနေ့ စကျတငျဘာ ၂၇ ရကျနကေ့စပွီး ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတှမှော လုပျသားအငျအား အပွညျ့လုပျခှငျ့ ပွုခဲ့သလို အမိုးအကာမပါတဲ့ ရကေူးကနျတှကေိုလညျး ပွနျဖှငျ့ခှငျ့ ပွုခဲ့ပါတယျ။ လူခငျြး ခပျခှာခှာနကွေရမယျ့ စညျးကမျးတှကေိုတော့ ဆကျလကျသတျမှတျထားဆဲဖွဈပါတယျ။ Australia နိုငျငံမှာ ကူးစကျမွနျ Delta ကိုဗဈရောဂါကူးစကျသူ June လမှာ စရှိခဲ့ပွီးနောကျ ကိုဗဈဆိုငျရာ ကနျ့သတျခကျြစညျးကမျးတှကေို ပွညျနယျတှအေလိုကျ ထုတျပွနျခဲ့ကွပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၄ နာရီအတှငျး N.S. W ပွညျနယျမှာ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၇၈၇ ယောကျနဲ့ သဆေုံးသူ ၁၂ ယောကျစံခြိနျတငျမြားခဲ့တယျလို့ တာဝနျရှိသူတှေ တနင်ျလာနကေ့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
#AustrliaCovid #Covid19 #VOABurmese